निर्मला हत्या प्रकरण अनुसन्धानको सुई दिलीपतिरै - ।। Naya Kuro ।।
२३ मंसिर २०७६, सोमबार १२:१० December 9, 2019 Naya KuroLeaveaComment on निर्मला हत्या प्रकरण अनुसन्धानको सुई दिलीपतिरै
२३ मंसिर । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको १६ महिनापछि पनि अनुसन्धानको सुई पुरानै आरोपी दिलपसिंह विष्टवरिपरि घुमिरहेको छ। निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण घाँटीमा बिझेको काँडासरह अनुभूति भइरहेका बेला प्रहरीले पछिल्लो पटक अनुसन्धानको सुई विष्टतर्फ घुमाएको हो।
केही दिनअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख डिआइजी निरजकुमार शाहीलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैं सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा गएका थिए। गत हप्ता नै प्रहरीले सो घटना सुल्झाउने गरी आशंकित व्यक्ति पक्राउ गर्ने तयारी थालेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक खनाल सिआइबीका प्रमुख डिआइजी शाहीलाई लिएर धनगढीसम्म पुगेर आएलगत्तै विष्टलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको थियो। तर त्यहाँ खटिएका केही अधिकृतहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर केही समयलाई पछि सारिएको छ। एसएसपी रामदत्त जोशी लामो समयदेखि त्यही कामका लागि सुदूरपश्चिममा खटिएका छन्।
स्रोतका अनुसार आशंकित व्यक्ति पक्राउ गर्न यथेष्ट प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले पनि प्रहरी केही दिन पछि हटेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले हत्यासँग सम्बन्धित प्रमाण बलियो बनाउन सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। एसएसपी जोशी अहिले धनगढीमा छन् भने सिआइबीका निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीको मुद्दा कञ्चनपुरमै भएकाले उनी आउजाउ गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका डिएनए विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजाल नेतृत्वमा डाक्टर तुलसी कँडेल र दिनेशकुमार झा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले डिएनएको नमुना परीक्षणमै त्रुटि भएकाले सो घटनामा डिएनएबाट दोषी पत्ता नलाग्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गत ५ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ ।
डिएनए परीक्षणमै त्रुटि भएको ठहर भएपछि परिस्थिति प्रमाणलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हालसम्मको अनुसन्धानमा दिलीपसिंह विष्ट अपराधको सबैभन्दा नजिक भएको प्रहरीको दाबी छ ।
उनलाई प्रहरीले गत वर्ष आरोपीको रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । डिएनए नमिलेपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाटै उनलाई छाडेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले विष्टलगायत केही व्यक्तिलाई पनि शंकाको सूचीमा राखेको छ। कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत दिनेश आचार्यले आशंकित व्यक्तिहरूको बारेमा थप प्रमाण संकलन गरिरहेको बताए पनि उनले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन्।
रिजाल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा परीक्षणको लागि लगिएको वीर्य भनेर परीक्षण गरिएको नमुना वीर्य नै हो भन्न नसकिने उल्लेख छ । यसअघि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत डिएनए परीक्षणमा त्रुटि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
कसैको डिएनए नमिलेपछि डिएनएमै त्रुटि भएको आशंकामा गृह मन्त्रालयले गत भदौमा रिजालको संयोजकत्वमा डिएनए परीक्षणसम्बन्धी विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको ११ बुँदे प्रतिवेदनले प्रहरीलाई परिस्थितिजन्य प्रमाण संकलन गर्न सहज भएको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’ मा वीर्य भएको बारे प्रयोगशालाबाट प्राप्त जानकारीबाट ‘भेरिफाई’ गर्न नसकिएको र प्रयोगशालाले पनि भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य हो या होइन पुष्टि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘पीडितबाट संकलित ‘भेजिनल स्वाब’ मा वीर्य भएको बारे प्रयोगशालाबाट प्राप्त जानकारीबाट भेरिफाई गर्न सकिएन। प्रयोगशालाले निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको पदार्थ वीर्य हो या होइन पुष्टि नै गरेन,’ ११ बुँदे प्रतिवेदनको चार नम्बरमा लेखिएको छ।
कोरोना संक्रमित कहाँ कतिजना उपचाररत? के छ अवस्था?
३ बैशाख २०७७, बुधबार ०६:२४ April 15, 2020 Naya Kuro
दैनिक आम्दानीबाट सरकार राज्य सञ्चालनको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार
१ असार २०७७, सोमबार ०८:४४ June 15, 2020 Naya Kuro
नयाँ नोट सटही दशैंका लागि शुरुः नोट साट्न सर्वसाधारणको भीड
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार २०:१७ September 27, 2019 Naya Kuro